Author: Meztinos Malashicage
Haddii haddaba ay xanaaq iyo kacdood kala hor timaado waxay ninka uga dhigan tahay toorri la suray.
Raaxada guurka carruurtu waalidka weydiiyaan qaar baanay kaba jawaabi karin iyagoo ka xishoonaya ka hadalka waxyaabaha qaarkood. Ha yeeshee fursadda uur-qaadistu waxay yaraataa kolka la isticmaalo qaab keena inay xawadu dibadda u soo baxdo.
Kolka ninku uu ka soo laabto shaqada isaga oo jir iyo maskaxba ka daallan, tabar uma haayo inuu dhegeysto dacwooyinka iyo eer sheegashada xaaskiisa, balse waxaa uu doonayaa inuu arko iyada oo u diyaarisay cunto uu jecel yahay. Wallucu waxa uu mararka qaar la yimaadaa isbeddel ku dhaca dabeecadda haweeneyda marka raaxada guurka eego la dhaqanka ninkeeda, oo ama waxay raaxada guurka jeclaataa sidii ay awal u jaclayd si ka daran amaba waxaa dhiba araggiisa iskaba daa hadal iyo raaxada guurka dhaqan ee.
Usbuuca saddexaadba way dareemi kartaa horumarka la taaban karo ee ay ka gaartay raaxada galmada kana dhashay layligaasi.
Waddanka Ingiriiska waxaad arkaysaa rag goob la wada buuxo si aan gambasho iyo xishood raaxada guurka dhuuso ugu sii deynaya, waddanka Talyaanigana waaba laguugu mahad celinayaa.
Kolka intay haweeneydu sariirta ama miis is ag taagto qaarkeeda hore si dhacadiid ah ugu dul seexato, iyada oo gondaheeda ku taagan, amaba ku dul taagan walax adag oon dhaqdhaqaaqaynin, dabeeto raaxada guurka lugeheeda kala fogayso.
Balse dad badan raaxada guurka taas fahmin oo guurka u qaatay cadaawad iyo is neceyb joogto ah. Guurma dabadeed bushimuhu waxay u hoobtaan xaggaa iyo shafka iyo naasaha oo kamid ah meelaha ugu dareenka badan jirka haweeneyda, gaar ahaan ibaha naasaha.
Waxaad haddaba halkaasi ka garan kartaa in firfircoonaanta iyo caafimaad qabka maalintii ay daliil u yihiin inta jeer ee saxda ah ee la isu galmoon karo. Ha yeeshee, shucuubta xitaa kuwa hablohooda sunno gudeeya siday dadka qaar ku magacaabaanlama gooyo qolfada oo qura balse waxa lala jaraa kintirka oo idil, halka gudniinka Fircooniga ah laga dabarjaro kintirkii iyo dhammaanba faruuryihii raaxada guurka, sida aynu gadaal ka sharxi doonno.
Dumar badan ayaan la qancin karin oo baahidooda shaqsiyeed iyo mida qaraabadeeda aysan dhamaad lahayn. Si raaxada guurka jacaylka labada qof u noqdo kii waara, waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo.
Waxa la hubiyey in qaab kasta oo kordhiya macaanta xilliga raaxada guurka uu sidoo kale kordhiyo suuragalnimada uur-qaadista. Waxa uu isku dayaa inuu xiriir raaxada guurka la yeesho dhallinyarada asaga la jaalka ah, xiriir qaabkiisa iyo qiimihiisa asagu uu xaddidayo.
Waxaan muran raaxada guurka jirin in haweeneyda ninkeeda ay jeceshahay uu labada cajar dhexdooda kaga salaaxo mid kamid ah labadiisa gacmood, isaga oo isla markaasi tan kale kaga raaxada guurka labadeeda naas, ay dareento istiin iyo raaxo labanlaab ah. Xawadu waxay ka tagtaa labada makaroofan gashaana gudaha caloosha, dabeetana hareereysaa ugxan-sidaha, iyada oo raadinaysa meel ay u marto ama ay suuragal tahay inay ugxantu ka soo baxdo, waxaanay saacado badan u sugtaa guurla ugxanta sidii eeyo ugaareed oo hor fadhiya god bakayle.
Masaafada u dhaxaysa halka ay ugxantu taallo iyo afka ilma-galeenku waxay dhan tahay sintimitir, muddada ay xawadu u socoto halkaasina waxay raaxada guurka dhigantaa muddada uu nin lugaynayaa ku jari karo masaafo 8 kiilomitir ah. Waxa loo baahan yahay inaan sidii maxkamaddii carruurta loogu kala garqaadin, taasi oo raaxada guurka dhalinaysa in hadduu xukunku waddadiisii rqaxada ay abuurmayso cuqdad uu qaado kii laga xukmiyey, dareemana in laga eexday.
Sidoo kale waxa la waayey hal xadiis oo saxiix ah oo waajibinaya amaba sunno ka dhigaya gudniinku. Waa inuu galmo kasta dabadeed xubnihiisa si raaxada guurka u mayraa, gaar ahaan kolka uu ka baqayo inuu jabto qaado, isaga oo ku dadaalaya inuu xubnahaasi ka ilaaliyo wax dhaawac ah.
Su raaxada guurka ayaan qabaa wxn ahy wiil 17jir ah wn kacsi badanahay maalintii waxaan kacsadaa laba jeer habeenkiina raaxada guurka mar wxn jeclahy markasta inaan galmoodo marka su aashu waxay tahay istiinku waa maxay Timirta sababta loo doortay waxa weeye iyadoo aad u macaan oo uu ilmaha yari macaansanayo iyo iyada oo ka kooban iskudhis aan u baahnayn inay calooshu shiiddo oo isagu ah nafaqo diyaar ah, dhiiggana si toos ah u raaca, waxana weeye sonkor-gulukos. Maxaan sameeyaa si uu iiga raalli noqdo?
Waxaan eajeynayaa inay taladani ku anfici doonto.
Bushimaha gaaxada inta lagu cantuugo oo lagu qabto xayndaabka naaska, markaasi carrabka ibta lagu cayaarsiiyo. Gebagebadii, waa inu waalidku kaga jawaabo weydiimaha carruurta ee ku saabsan jinsiga si degganaani ku jirto, kana fogeeyo muuqaallada jinsiyeed raaxada guurka aan bannaanayn ee uu taleefishanku soo bandhigayo. Sidaas looma baahna, galmada waa in laga dhigaa mid xiiso leh, oo la sii qorsheeyaa oo guriga la carfiyaa oo ay ka horeysaa dareen, jeceyl iyo istaabasho intaan hoos loo daadagin.
Dabeeto waa inay xubnahaasi ku qallajisaa shukumaan ama gabal mara ah oo u gaar ah, isticmaashaana boolbire. Raaxada guurka salaad ku jira oo sujuudsan hadday dusha uga baxaan sujuudda waa uu dheereyn raaxada guurka si aanu cayaarta uga qasin ilaa ay iskood uga degaan.
Caadadaasi ilaa iyo maanta waxay ka jirtaa dalal badan waxana tusaale loo soo qaadan karaa dalka Itoobiya, ooy dumarku ciridka cagaarsadaan. In kasta oo dhibaatooyinkaasi oo dhami sugayaan, haddana waa inay wax waliba ka hor marisaa nadaafadda guriga iyo tan jirkeeda intaba, waana inaysan illoobin isqurxinta iyo lebbiska wanaagsan.
Waxa laga yaabaa in ilmuhu uu kula cayaaro raaxada guurka weyn isagoo garka ka qabsanaya amaba marada uu xiranyahay. Waalid waxa ugu liita bay yiraahdaan culimadu kan u roonaanta ubadkiisu ay dulleyso raaxada guurka ka toosin lahayd. Arintaan waa mid dadka badankoodu ay ogyihiin balse mararka qaar ayaa dhacda in xadka laga gudbo. Sidaa daraadeed, waxa habboon in aan raaxada guurka isticmaalin xilliga uurka.